Neymar Jr Oo U Adkaysan Kari Waayay Oohintii Luis Suarez Iyo Fariinta Uu Ku Dhiiro Galiyay. - Gool24.Net
Neymar Jr Oo U Adkaysan Kari Waayay Oohintii Luis Suarez Iyo Fariinta Uu Ku Dhiiro Galiyay.
Luis Suarez waxay xalay u ahayd habeen murugo badan isla markaana aanu wax hurdo ah seexan karin kadib markii uu sabab u noqday in xulkiisa Uruguay laga reebay tartanka Copa America isaga oo ahaa xidiga kaliya ee qasaariyay rekoodhihii uu tuuray kulankii Peru.
Luis Suarez ayaa oohin jabsaday isla markaana muraaro dilaac isqaban kari waayay kadib markii uu arkay xulkiisa Uruguay oo daaqada Copa America laga tuuray oo uu waliba isagu sabab u noqday.
Laakiin xidiga kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Jr ayaa sii wada in uu dabka ku sii shido wararka suuqa kala iibsiga ee Barcelona la xidhiidhinaya kadib markii uu Luis Suarez fariin dhiiro galin ah u diray.
Iyada oo la ogaa in warbaahinta caalamku ay baryihii ugu danbeeyay si wayn u hadal haysay heshiiska uu Neymar Jr ugu soo laabanayo Barcelona waxa uu dhawaan si furan hambalyo dhalasho ugu diray Messi halka uu hadda Suarez fariin dhiiro galin ah u diray.
Neymar Jr ayaa bartiisa Instagram waxa uu ku soo share-gareeyay muuqaalka Luis Suarez oo oohinta xejisan kari waayay kadib guuldaradii Peru wuxuuna soo raaciyay fariin qoraal uu Suarez dhiiro galin uga dhigay.
Neymar Jr ayaa muuqaalka uu Suarez oohayay waxa uu soo raaciyay: “Istaag! aad ayaad walaal u fiican tahay, saaxiib waan ku jecelahay”.
Inkasta oo ay fariintan Neymar Jr tahay mid uu kaga damqaday xanuunka guuldarada iyo murugada haysatay saaxiibkiisii Barcelona ee Luis Suarez, haddana waxay sii kordhinaysaa wararkii suuqa iyo sida uu qalbigiisu ugu xidhan yahay Messi iyo Suarez.
Halkan ka daawo qaabkii uu Luis Suarez naftiisa u xakamayn kari waayay ee uu oohinta u jabsaday markii uu soo dhamaaday kulankii Peru ay rekoodhayaasha 5-4 ta ahaa ugu garaacday xulkiisa Uruguay.
Luis Suarez crying after the end of
— GOAL SHOW ⚽️ (@ShowGoaal) June 29, 2019
Kooxaha Barcelona iyo Paris Saint-Germain ayaa wali wada xaajoodyo ku jira si ay iskula meel dhigi karaan in Neymar Jr uu dib ugu soo laabto Camp Nou iyada oo PSG doonaysa 130 milyan yuro iyo laba ciyaartoy oo Barca ka tirsan.